XIRFADAHA FARSAMADA. Læticia Hallyday go'doon: sababihii dhabta ahaa ee ka dambeeyay bixitaankii Sébastien Farran - KU SAMEE
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »XIRFADAHA FADLAN. Læticia Hallyday go'doon: sababaha dhabta ah ee ka dambeeya bixitaanka Sébastien Farran
XIRFADAHA FARSAMADA. Læticia Hallyday go'doon: sababaha dhabta ah ee ka dambeeya bixitaanka Sébastien Farran
"Marka waa wax laga qoomameeyo oo aan xanuun la'aan aheyn maanta, waa inaan go'aan ka gaaran sidii aan u soo afjari lahaa hamigan weyn". 10 ee Sebtember ee la soo dhaafay, Sébastien Farran ayaa bayaan ay siisay wakaaladda wararka ee AFP in ay gelineyso a Mudada uu la shaqeynayo qoyska Hallyday. Hadana tiirka udub dhexaadka u ah nolosha Læticia Hallyday ilaa dhimashadii Taulier, hase yeeshe iyadu waa asalkii asalkiisa uu ka tagay, sidaad shaaca uga qaadday u dhaw, daabacaaddeeda oo ku taal dukaamada jimcaha 13 September.
Si Sébastien Farran ayaa qaaday talaabada lagu shaacin doono dhamaadka shaqadiisa maamule ahaan, kaliya waa Læticia Hallyday bixiyo. Waa in la sheegaa in afadii ugu dambeysay ay isku murmi jirtay maamulaha hore iyo aabihiis, qabow dhowr bilood. Waxaana iska cad inay iyadu dooratay. Sida buugga shaaca ka qaaday Laeticia, sheekada dhabta ah, ee Laurence Pieau iyo François Vignolle, Sébastien Farran iyo André Boudou si adag ayey u dagaalameen ka dib aaska Johnny, ee magaalada Saint Barthelemy. Yaad tahay Nooca motherfucker, ayaa bilaabay Sébastien Farran aabihii Laeticia, intuu doonayey inuu ogaado bal inuu yahay "Wax walba waa ay u socdeen" dhaqaale.
Haddaba la heshiisiiyey aabbihiis, Læticia Hallyday sidaa darteed waxay ahayd in la helo badal si Sébastien Farran. Sida lagu dhawaaqay Le Parisienwaa saaran yahay Michel Jankielewicz, oo ah xubin hore oo ka tirsan qabiilka, in doorashadiisu joogsatay. Sanado, maamulaha cusub ee Johnny Hallyday wuxuu ka taxadaray soo saarista sawirrada bandhigyadiisa iyo weliba xiriirkiisa isgaarsiinta. Waxay ahayd sixir. Waa ii sharaf in aan dhinacna la joogno, oo aan wax barto, waa qof baahi badan qabay, ha ahaato istuudiyaha, dib u tababaridda riwaayadaha ...ayuu sharaxay 20 Minutes sanadkii la soo dhaafay. Wuxuu lahaa xirfad dhab ah iyo shaqo adag.
SIDA LOO BAAHAN YAHAY? Wargeyskaagu wuxuu ku jiraa iibinta laga bilaabo Jimcaha 5 July ee wargeyska, on Androidon iPad iyo KiosqueMag.
Laeticia Hallyday waxay ka soo baxday ballamo iyada oo la leh Sebastien Farran oo ku taal Paris Oktoobar 16 2018
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/exclu-closer-l-ticia-hallyday-isolee-les-vraies-raisons-derriere-le-depart-de-se-1022305
Læticia Hallyday goor dhow ayey ku soo noqotay Faransiiska, fasaxa umusha ee Meghan Markle wuu dhammaaday: dhammaan
Boqoradda Snobbish: Waa maxay sababta ay boqoraddu uga carartay eeydii boqornimada ee dhaqameed ee "wax yar oo sir ah" & # X; sababta
Tilmaamaha: 30 aan caadi ahayn laakiin siyaabo macaan loo kariyo cuntada
Kuleylka kulul ee North Carolina Fair wuxuu dilayaa 2 Dadka ka dib markii uu ku faafay 134 cudurka Legionnaire - BGR
PHOTOS. Daniel Auteuil ayaa hareereeyay gabdhihiisa Nelly iyo Aurore iyo xaaskiisa Aude Ambroggi si ay u soo bandhigaan filimkiisa cusub
India: Pakistan oo xabbad-joojin ka joojisay shirkadda IB ee gobolka Jammu | Wararka Hindiya
DADKA & LIFESTYLE5,956
Video dheeraad ah2,563